Soosaarayaasha & Soosaarayaasha Jilicsan
Qalabka qaboojiyaha boorsada ee biyuhu ka baxsan yihiin, 30 gasacado oo awood ah, naqshad laba-garabka ah, si aad gacmahaaga u xorayn karto intaad cunto badan wadato. Soo qaado qaboojiyaha BD-001-37 ee xiisaha leh.
Boorsada Boorsada Meel-qaboojiyaha ah ee Awood-weyn
Boorso dibedda ah oo ay ku jiraan 30 daasadood oo awood weyn leh. Qalabka TPU ee aan biyuhu lahayn, naqshad faahfaahsan oo qurux badan, awood aad u weyn, iyo tayada lebiska u adkaysta. Haddii aad kaambayn tahay, dalxiis, dibedda, socodka, ama xitaa goob dagaal oo dhab ah, waxay noqon kartaa mid karti leh.